TOMATO "BARIISAD BALOOGA AH": SIFOOYINKA IYO SHARAXAADDA YAANYO KALA DUWAN, SAWIR, BEERID, DILLAAC IYO DARYEEL - BEER CAGAARAN
Qaybta ugu cusub ee yaanyo "beerta qurxinta": sifooyinka iyo sharraxaadda yaanyada iyo sawirrada, beerashada iyo cayayaanka
Waqtigan xaadirka ah, mid ka mid ah dalagyada khudradda ah ayaa loo isticmaalaa sida ballaaran oo kala duwan sida yaanyo. Dhibaatada ugu weyn ee ninkii beerta ka shaqaynayay - doorashada saxda ah ee kala duwan ee yaanyada.
Waa maxay yaanyada si ay u doortaan, sidaa darteed waxay ahayd dhadhan fiican leh, iyo beergooyska waa mid sare, iyo daryeelka waa yar yahay? In this article waxaan fiirin doonaa yaanyo "Bari ciida quruxda" iyo sharaxaadda noocyo kala duwan ee yaanyada.
Tomato "Baxoosiye beerta": sharaxaadda noocyada kala duwan
Magaca dugsiga Petrusha Ogorodnik
Sharaxaad guud Iskudhaf aad u sareeya oo dhexdhexaad ah
Bisaylka 111-115 maalmood
Foomka Xasuuso fur
Cunto dhexdhexaad ah 180-200 garaam
Codsiga Fresh, casiir iyo qasacadaysan
Noocyo dhaadheer 4-6 kg duurka
Noocyada sii kordhaya Waxaa lagu kori karaa gooyn
Cadaadiska cudurada Adkeysiga cudurada waaweyn
Tamaandhada kala duwan Petrushka beerta waa mid ka mid ah noocyada ugu cusub oo loo yaqaan altai breeders. Aynu bilowno sharaxaad kusaabsan tamaandhaynta "Bari Petrus". Tani waa nooca superdeterminant hybrid.
Shtambov baadiyaha, hoos u dhigay, ilaa 60 cm sare. Marka koray aqalka dhirta lagu koriyo, waxay gaari kartaa 1-1.2 mitir. Tomato Bacaha yaryar ee yaryar waa mid dhexdhexaad ah, wuxuu leeyahay muddo dheer firfircoonaanta laga bilaabo Julaay ilaa Oktoobar.
Buundada waa qaro weyn, oo hooseysa, oo leh tiro badan oo ugxansidaha, ka baxo midab casiir leh, midab madow ah. Bariisada yaryar ee Petus adkaysi u leh cudurada sida kalluunka iyo caleemaha xididka, dabaylo goor dambe, caleemo masax.
Tamaandho ah kala duwan ee Petrusha ninkii beerta ka shaqaynayay waxaa lagu kala soocay fruiting frutter, miraha waa dhalaalaya, casaan, qoorta-qaabeeya, u egtahay cap (halkan magaca asalka ah ee kala duwan).
Miro miro 180-200 garaam, waxay gaari kartaa 300 garaam. Fasalka wuxuu leeyahay tayada dhadhanka fiican, oo leh heerka sare ee sonkorta. Midhaha Reer Petrushu waa mid adag, xoog badan, oo muddo dheer lagu kaydiyey.
Waxaad isbarbar dhigi kartaa miisaanka midhaha Petrusa leh noocyo kale oo jadwalka hoose ah:
Akhriso boggayaga internetka: sida loo helo dhalidda sare ee yaanyada bannaanka u furan?
Sida loo koro yaanyada delicious jiilaalka ee lagu koriyo ah? Maxay yihiin mabaadii'da hore ee beerista noocyada beeraha?
Oo hadda waxaan ku siinaynaa si aad u ogaato sawirka yaanyo "Petrusha beerta".
Fasalkani wuxuu ku haboon yahay dhul furan oo lagu koriyo. Dhalidda ee kala duwan ee lagu koriyo ah waa ka hooseeya berrin bannaan, sidaas darteed waa la doorbidi karaa inuu koro Parsley ee hawada u furan!
Noocyo yaanyo ah Beerta Petush ee ku habboon gobollada oo dhan, oo ay ku jiraan waqooyiga, sababtoo ah waxaa laga soo saaray Siberia. Petrusha miro wanaagsan iyo xaaladaha qalalan uma baahna waraabin badan.
Tamaandho waa dhadhan fiican, oo ku habboon caano, sababtoo ah miraha waa mid dhexdhexaad ah oo xoog leh, iyo sidoo kale soosaarka casiirka.
Waxyaabaha dhalidda ee yaanyo Beerta xayawaanka ah (sida waxaa sidoo kale loo yaqaan) waa 4-6 kg oo ka mid ah baadiyaha. Muuqaalka ugu muhiimsan ee noocyada kala duwan waa cidhiidhiga pasynkovany, burushyada miro-dhalaalaya oo wanaagsan ayaa laga sameeyay dhammaan caleemaha.
Waxaad isbarbardhigi kartaa wax soo saarka beeraha ee dadka kale jadwalka hoose:
Bari Petrus ah 4-6 baadiyaha
Gulliver 7 kg oo baadiyaha ah
Lady shedi 7.5 kg mitir labajibbaaran
Suumanka dufanka leh 5-6 kg ka baadiyaha
Dollada 8-9 kg halkii mitir labajibbaaran
Deganaha xagaaga 4 kg oo baadiyaha ah
Nin caajis ah 15 kg mitir labajibbaaran
Madaxweyne 7-9 kg mitir labajibbaaran
Boqorka suuqa 10-12 kg mitir labajibbaaran
Burushyada waaweyn ee miro ayaa loo sameeyaa caleen kasta, baadiyaha way yar tahay, hase yeeshee, aad u fara badan, fruiting frites iyo tiro badan oo ka mid ah laamaha daboolay miraha, taageerada adag ayaa lagama maarmaan ah.
Muuqaal kale oo ka mid ah beeraha kala duwan ee Petro waa suurtogalnimada in gooyn sii kordhaya. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u isticmaali kartaa sida kore ee kore, iyo dusha sare ee laamiyada, kaas oo ah in la dhigo biyo ama dhulka qoyan 10 maalmood.
Sidaa darteed, leh tirada ugu yar ee geedo, aad si joogto ah u kordhin kartaa, iyo muddada fruiting kordhiyaa si waafaqsan. Si aad u cuntid on yaanyadaada oo dhan jiilaalka, waxaad ka bixi kartaa gudaha gudaha ku jira weelka, si joogto ah u jebin iyo xidid caleemaha. On miiska waxaad yeelan doontaa yaanyada cusub, iyo guga horey u koray dhirta.
Akhri sidoo kale hababka kale ee geedo sii kordhaya:
oo ku dhex jira;
on technology teknoolojiyada;
in dhirta peat;
Haddii aad wali isticmaasho habka caadiga ah ee tamaandhada sii kordhaya, ka dibna miraha geedo waa in la beeraa dhamaadka bisha February ama bilowga March. Ka dib muuqaalka laba caleemo, geedo waa la duubay, oo hoos yimaada filimka filimka, soo degitaanka waxaa la sameeyaa dhammaadka Abriil, oo ah dhulka furan - bisha Maajo. Ku saabsan geedo sii kordhaya oo aan ka soo qaadan akhrinta halkan.
Marka la beero, miisaankiisu waa superphosphate ama nitrophosphate ayaa lagu daraa ceel kasta. Ka dib, 10 maalmood ka dib, bacariminta waa in lagu celiyo Bacriminta adag ee yaanyada, ku xoqin leh xal daciif ah ee dalagga potassium siinayaa saameyn wanaagsan.
Dharka ugu sarreeya waxaa la sameeyaa 10-15 maalmood oo kasta, bannaanka u isticmaalida dawooyinka dadweynaha, waraabinta ka soo saarka khamiir ah saameyn aad u wanaagsan. Mid ka mid ma aha in la iloobo in yaanyada ma jecla dheeraad ah ee Bacriminta nitrogen, taas oo ah, digada cusub lagu soo bandhigay tiro badan waxay kordhisaa kordhinta cagaar (caleemo), laakiin yaraynaya tirada ugxan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Bacriminta yaanyada.:
Organic, macdanta, fosfooriga, Bacriminta iyo diyaarinta-Bacriminta ee geedo iyo TOP ugu fiican.
Ciyaalka, iodine, ammonia, hydrogen peroxide, ash, boric acid.
Waa maxay quudinta foliar iyo marka la soo qaado, sida loo fuliyo.
Noocyo yaanyo "Baalashaha Petush" adkaysi u ah cudurka weyn, waxaa yar waxyeello by blight iyo kallana xidid.
Phytophthora waa cudurada fungal ee ugu caansan iyo ugu khatarsan ee yaanyada, waxaa loo yaqaan "Black Fire".
Si looga hortago cudurradan, waxaa lagama maarmaan ah in looga hortago dhirashada beeraha, waraabinta subaxda, hubi inaad hawada u sameyso aqalka dhirta lagu koriyo, iyo sidoo kale dhirta lagu buufiyo baayoolojiyada, sida Fitosporin, Zaslon, Barrier, isticmaal daweyno dad ah (infusions of geedo, Doodwanaag).
Mid ka mid ah hababka ugu waxtarsan dadweynaha ayaa ku buufinaya caleemaha leh cayayaanka, iyo sidoo kale faleebo basasha iyo diirka toon ah.
Mosaic caleemaha iyo caleemaha vertex waa cuduro aan caadi ahayn oo yaanyo ah.
Iyada oo la jabiyo caleemaha masaajo waxay helayaan midab kala duwan (laga bilaabo cagaar khafiif ah ilaa cawl), ilkuhu waa miraha yaanyo. Xaaladdan, caleemaha saameeyeen waa in la saaro, iyo miraha waa in la calcined ka hor beerto.
Kareemka Vertex wuxuu ku yaryahay midab khafiif ah, oo ay sababtay la'aanta qoyaan, iyo sidoo kale xad-dhaaf ah nitrogen iyo la'aanta kalsiyum. Si looga hortago kalluunka dushiisa oo laga yareeyo infakshanka yaanyada, isticmaal dambas, burka dolomite, ukunta la jajabiyey dharka.
Haddii aad raacdo talo-siinteena, waqtigooda ku quudi, biyo yari si habboon, hawo aqalka dhirta lagu koriyo, isticmaal diyaargarowga lagama maarmaanka u ahna isticmaal dawooyinka dadku, waxaad heli doontaa dhadhan badan, caafimaad leh, iyo sidoo kale sifooyinka cuntada ee miraha.
Halkan hoose waxaad ka heli doontaa isku xirnaanta noocyada yaanyada leh shuruudaha kala duwan:
Gaar ahaan hore Dhaqdhaqaaqa-dillaac Xilliga bartamaha
Transnistria Cusub Gantaal Martiqaad
Pullet Ribbedka Maraykanka Pear cas
Shirkadda sonkorta De Barao Chernomor
Torbay f1 Titan Benito F1
Tretyakovsky Goolhayaha dheer Paul Robson
Crime Crime Boqorka boqorrada Maroodiga maraqa
Chio Chio San Cabbirka Ruushka Mashenka